पृ्थ्वीनारायण शाहबाट यु’द्ध कला सिकेर १० वर्षे जनयु’द्ध हाँकेको हुँः प्रचण्ड – Khabarhouse
पृ्थ्वीनारायण शाहबाट यु’द्ध कला सिकेर १० वर्षे जनयु’द्ध हाँकेको हुँः प्रचण्ड
Khabar house | १६ पुष २०७६, बुधबार १५:४५ | Comments
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहबा यु’द्धकला सिकेर १० वर्षे जनयु’द्धको नेतृत्व गरेको जनाएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा सिन्धुलि पुगेका प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहबाट यु’द्धकला सिकेको स्मरण गर्दै भने, मलाई माओबाट प्रेरित भएर माओबाट यु’द्ध कला सिकेको अनुमान गर्नु भएको होला ।
त्यस्तो होइन् । मैले नेपाली माटोको अध्ययन गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट यु’द्ध कला सिकेको जनाए । यस्तै उनले पृथ्वीनारायण शाहबाट यु’द्ध कला सिकेको र गाैतम बुद्धबाट शान्तिको बाटो अपनाउने कुरा सिकेको दा’बी गरेका छन् । सिन्धुलिगढीको इतिहाँससँगै सिन्धुली पर्यटकका लागि नाैलो गन्तव्य बन्ने समेत आशा व्यक्त गरे ।
यस्तै, प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको कुरा खोतल्दै सेना समायोजन र शान्ति स्थापनार्थ पार्टी फुटेको र आफूलाई पार्टी भन्दा नेपाल र नेपालीको भविष्यले गर्दा त्यो कुनै ठूलो कुरा नलागेको जनाए । सिन्धुलीको जुनार लगायतका कुरा ऐ’तिहासिक कुरा रहेको र यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला आएको समेत दा’बी गरे ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : स्थायी शान्तिसँगै देशमा पर्यटक आगमन बढ्दो छ। वृद्धि दर भने सीमित छ। सन् २०२० लाई सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख नै पर्यटक भि¬त्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।त्यो हासिल गर्न जुन रफ्तारमा लाग्नु पर्ने हो, त्यसमा ढिला भइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। हाल वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक आइरहेका छन्। विदेशी पर्यटक भित्र्याउने एकमात्रै हवाई मार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो।
सन् २०१८ मा हवाईमार्गबाट ९ लाख ६९ हजार र स्थलमार्गबाट दुई लाख ३ हजार गरी कुल ११लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्यटन व्यवसायी एवम् नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य राजेन्द्र सापकोटा भन्छन्, ‘तयारी विनाको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ। सन् २०२० लाई आधार वर्षका रूपमा मनाउनुपर्छ।’ २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य बनाएर त्रिवर्षीय योजना तय गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
उनले भने, ‘अहिलेकै जस्तो कमजोर पूर्वाधार, सेवासुविधा र प्रवद्र्धनले लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिन्न।’ नेपाल भ्रमणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू बीबीसी, सीएनएन, ट्रिप एडभाइजर तथा भारत र चीनका उत्कृष्ट टीभी च्यानलमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। सरकारले पर्यटक आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याएको छैन। कम्तीमा २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकलाई भिसा फ्री गर्ने, नेपाल आएपछि कुन गन्तव्यमा जाँदा के सुविधासेवा पाइने त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, हिमाल आरोहणमा आकर्षित गर्न रोयल्टीमा छुट दिने लगायतका सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले जापान उडान सुरु गरे पनि जहाज खाली उड्नुपर्ने अवस्था छ। ‘सरकारले जापानी पर्यटक आकर्षित गर्न खै त प्याकेज बनाएको ? ’ एक व्यवसायीले प्रश्न गरे। भारतीय पर्यटकलाई मात्रै लक्षित गरेर पशुपति दर्शन वा पूजा प्याकेज दिने हो भने पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुने सुझाव व्यवसायीको छ। ‘हालसम्मको तयारी अनुसार १२ लाखबाट १८ लाख पर्यटक पुर्‍याउन सकियो भने सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ’, नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले भने।
शाक्यका अनुसार छोटो तयारीमा एकैपटक धेरै पर्यटक ल्याउनुपर्ने भएकाले चुनौती धेरै छ। विदेशमा नेपाल भ्रमण बारे प्रवद्र्धन गर्दा ‘लाइफटाइम एक्सपिरियन्स नेपाल’ भन्ने नारा नै बुझाउन सजिलो नभएको शाक्य बताउँ छन्। उनले भने, ‘विदेशी पर्यटक नेपाल किन आउने र के हो लाइफटाइम एक्सपिरियन्स नेपाल भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ।’त्रिभुवन विमानस्थलबाट सन् २०१८ मा ७२ लाखले आवागमन गरेको तथ्यांक छ। तीमध्ये पर्यटक नौ लाख ६९ हजार थिए।
२०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका दुई लाख बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने हो भने पनि भ्रमण वर्षमा १५ लाख पर्यटक हवाई मार्गबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, यसका लागि विमानस्थलको क्षमता कमजोर छ। रात्रि उडानमा वायु सेवा कम्पनी आकर्षित छैनन्। उडान व्यव स्थित गर्न नसक्दा घण्टौं होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ। भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०२० को सुरुदेखि नै सञ्चालनमा आउने भनिए पनि उपयुक्त तयारी छैन।
विदेशी वायुसेवालाई भैरहवाबाट उडान गर्ने आधार पनि तय हुन सकेको छैन। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यका अनुसार त्रिभुवन विमान स्थलको क्षमता १५ लाखभन्दा बढी नभएकाले स्थल मार्गबाट पाँच लाख ल्याएर लक्ष्य पूरा गर्नु पर्नेछ। पर्यटक कसरी बढाउने र कुन बाटो भएर ल्याउने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेको जानकारी वैद्यले दिए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ तथा भ्रमण वर्ष २०२० का सदस्य सचिव दीपकराज जोशीका अनुसार पूर्वाधार नै प्रमुख चुनौती हो। विमानस्थल सुधार गरेमा १० प्रतिशत पर्यटक बढी आउने अनुमान उनको छ। २४ सै घण्टा विमान स्थल खुला गर्ने र रात्रि उडानलाई प्राथमिकता दिने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छैन।
उनले अफ सिजनमा पर्यटनको गतिविधि बढाउने, लुम्बिनी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, ८÷१० वटा नयाँ वायुसेवालाई भित्र्याउने र बजारीकरण बढाउनु पर्ने बताए । केही व्यवसायीले तयारी कम भएकाले २०२० लाई तयारी वर्षका रूपमा मनाउन र यसलाई सन् २०२२ सम्म लैजान प्रस्ताव गरेको जोशीले बताए। सबैको सुझावलाई सकारात्मक लिँदै पर्यटक लोभ्याउने गरी योजना बनाइरहेको जानकारी उनले दिए।
आजको राशिफल : वि.सं. २०७८ पौष २६ गते सोमवार, यी राशिहरूकाे च’म्किनेछ भाग्य